↑ Apollo 8 Mission Report (PDF)။ NASA (February 1969)။2March 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ June 28, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ – The mass for LTA-B was less than that ofaflying LM, because it was essentiallyaboilerplate decent stage. A fully loaded, flight-ready LM, like the Eagle from Apollo 11, hadamass of ၁၅,၀၉၅ ကီလိုဂရမ် (၃၃,၂၇၈ ပေါင်), including propellants.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အပိုလို_၈&oldid=660171" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၁၊ ၁၁:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။